Waraysi: Madaxa Rugta Ganacsiga Wajeer - BBC News Somali
Waraysi: Madaxa Rugta Ganacsiga Wajeer
Dhawaan waxaa magaalada New York lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga ee caalamiga. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray qaabka loo xallinayo khilaafaadka soo kala dhex gala rugaha ganacsiga ee dunida iyo maalgaliyeyaasha iyo xukuumadaha.
Dadkii ka qayb galay kulankaas waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle (Cabdiraxmaan Cayuun) oo ah agaasimaha rugta ganacsiga ee degmada Wajeer, sidoo kalena xubin ka ah rugta ganacsiga ee Kenya.
Cabdiraxmaan hadda wuxuu ku sugan yahay Magaalada Minneapolis ee waddanka Maraykanka. Waxaa la kulmay oo waraystay, wariyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen oo marka hore weydiiyey sababta waxyaabihii kulanka looga hadlay ay iyaga muhiim ugu yihiin.